Akụkọ - Ngwakọta ígwè nchara - akwa mgbochi na-eyi akwa, ogologo ndụ na arụmọrụ dị elu
Abrasives ọgbụgba ọkụ
Ngwongwo ígwè / grit
Obere carbon steel
Iburu alloy grit
Igwe anaghị agba nchara / carbon nchara ịkpụ
Zinc / Ọla kọpa / Aluminom bee waya
Ogbo mgbasa ozi
Aluminom aja aja oxide
Na-agbawa agbawa Machine & mapụtara Parts
Drum ụdị shot gbawara igwe
Belt idahari gbaa gbawara igwe
Ala ebu Shot Blast Machine
Na-aga n'ihu Ime Rail Shot Blast Machine
Hanger ụdị shot gbawara igwe
Ọgba ọkụ igwe akụkụ ahụ mapụtara
Egweri Wheels Ma tingcha Disc
Egweri wheel FW-09 usoro
Egweri wheel FW-07 usoro
Tingcha diski FS-03 usoro
Tingcha diski FS-05 usoro
Ahụkarị Ahịa Nsuso
Ngwá ọrụ ígwè agụba - elu na-eyi ndị na-eguzogide, ogologo ndụ na elu na-eri arụmọrụ
Ngwongwo igwe bu ihe eji eme ihe eji emeputa ihe ndi mmadu, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo na ndi na-eguzogide ya. kewara carbon ngwá ígwè, alloy ngwá ọrụ ígwè na elu na-agba ngwá ọrụ ígwè.
A na-akpọ ígwè dị iche iche maka ịmepụta ihe dị iche iche na-egbu ihe, oyi na nrụrụ dị ọkụ nwụrụ, akụrụngwa na ngwaọrụ ndị ọzọ a na-akpọ nchara ngwaọrụ. ihe ndi a choro, dika isi ike uhie, ngbusi ike, nguzosi ike di iche, nguzogide ike nke oma na ihe ndi ozo di omimi.
TAA mepụtakwara agụba ọhụrụ eji igwe eji arụ ọrụ. Site na ịcha, mmiri egwe ọka na ndị ọzọ na Filiks, UM UBARA nwere ọzọ eyi eguzogide na mmetụta na-eguzogide.
Ngwaọrụ ígwè pupụtara eji ya na mkpanaka waya, akụrụngwa akụrụngwa, nchara ígwè, igwe ihe eji arụ ọrụ, igwe, gia, mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Gịnị bụ uru nke ngwá ọrụ ígwè agụba?
Ndị na-eri arụmọrụ nke ngwá ọrụ ígwè agụba dị elu: ọnụ ahịa dị elu karịa agụba nkịtị, yana ndụ ọrụ ọtụtụ oge nke agụba nkịtị. N'otu oge, belata oge nke ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ na-arụzi ọrụ, belata ike nke ndị ọrụ. The eyi eguzogide nke anyịngwongwo ígwè pupụtara dị nnọọ elu karịa nke nkịtị elu chromium pupụtara na ahịa!
Ngwá ọrụ ígwè agụba bụ ụdị nke na-eyi na-eguzogide ihe nwere ezigbo arụmọrụ. Ọ nwere nguzogide akwa dị elu karịa nchara alloy, ọ nwere ezi ike, ike na ezigbo okpomọkụ dị elu na njigide nrụrụ. Ndụ ọrụ nke ngwaọrụ nchara nwere njikọ chiri anya na ogo ọgwụgwọ ọgwụgwọ. A na-eji ọgwụgwọ okpomọkụ nke akụrụngwa eme ihe site na mgbakwunye spheroidal iji nweta ọdịdị na-agbanwe agbanwe, usoro ọgwụgwọ ikpeazụ a na-agwụ na obere iwe ọkụ (nchara nchara dị ọkụ na 560 ℃ maka ugboro atọ), ka nweta usoro ihe siri ike dị iche iche na akwa carbides dị mma nke ekesara na matrix martensite ma hụ na nkwụsị nke ngwa ọrụ. Usoro ọgwụgwọ ọkụ na-ekpo ọkụ na-anwụ anwụ dị iche. Ọgwụgwọ nke mbụ bụ nkwonkwo na-arụ ọrụ, na ọgwụgwọ okpomọkụ ikpeazụ na-agwụsị gbakwunyere iwe ọkụ ma ọ bụ iwe iwe ọkụ dị elu iji nweta ezigbo usoro ihe eji arụ ọrụ.
Kedu ihe dị iche n'etiti mma nchara ígwè na agụba nkịtị?
TAA gbaa ọgbụgba ọkụ igwe ngwá ọrụ ígwè agụba nwere ọdịdị dị mma ma na-enwu gbaa, obere oghere ájá, ndụ ogologo ndụ na ezigbo ndozi na-eguzogide .Martly of nkịtị pupụtara bụ ala chromium agụba na chromium ọdịnaya n'okpuru 11%. Obere oge chromium nwere oke ntụpọ ， dị ka porosity, nsị aja, nsonye ájá, oghere ájá, mmụba ájá, imechi oyi, ịwụsa ezughi oke, ịda mbà, enweghị oghere, enweghị anụ, sarcoma, wdg.
Kedu uru nke iji eriri igwe eji arụ ọrụ?
N'ozuzu, ngwá ọrụ ígwè agụba nwere ogologo ọrụ ndụ ， n'ihi ya, ọ na-eweta ala nnọchi frequency.Ọzọ nke abụọ, n'ihi ogologo ndụ ọrụ na obere eyi nke ngwá ọrụ ígwè agụba, n'ụzọ dị irè belata ọnọdụ na shot ọgbụgba ọkụ igwe na-emechi maka idozi, ma belata ụgwọ ọrụ.
Mmepụta vidiyo nke ngwaọrụ ígwè agụba:
E wezụga ngwá ọrụ ígwè agụba, agụba nke ihe ndị ọzọ na-abụ dị,Ọdịnaya nke Cr-12%, 20%, 25% ma ọ bụ dị ka arịrịọ.
Na akụkụ ndị ọzọ akụkụ ahụ gbara gbawara igwe enwere ike inye ya, dika:whees, impeller, impeller case, impeller vanes, impeller isi, nche efere, lining efere were gabazie.
Ihe omumu ihe omuma nke oma ma di nma shot ọgbụgba ọkụ igwe na akụkụ mapụtara
Post oge: Mee-06-2021
No.288 Center Okporo ụzọ, Mengshui Zhoucun Zibo Shandong China